धर्मशास्त्र पढेर दलित मुक्ति हुँदैन « News of Nepal
धर्मशास्त्र पढेर दलित मुक्ति हुँदैन
मानव सभ्यता विकासको पहिलो सामाजिक उपज हो धर्म । समाजले धर्मको विकास गर्नु पुर्व सामाजिक कला, रितिरिवाज, सस्कृति, सस्कारको विकास भएको हो, धर्मको विकास समाज सञ्चालनका लागी भएको विधि थियो तर कालन्तरमा धर्मलाई समाज र मानवता भन्दा माथील्लो श्रेणी राखियो फस्वरुप धर्म सिमित जाति नियन्त्रित विधिको रुपमा विकास हुन गयो ।
धर्म के हो ? भनि धर्मशास्त्रको अध्यायन गर्नु र धर्मका सवालमा बुझ्नु अहिलेको पुस्ताका लागी राम्रो पक्ष हो, तर धर्म यस्तो किन बनाईयो ? भन्ने प्रश्न गर्न थालियो भने स्वयम धर्मशास्त्रबाट यो प्रश्नको जवाफ पाउन कठिन छ । मन्दिरका पुजारीहरु, पण्डितहरु, चर्चका पादरीहरु, धर्म भिरुहरु, धार्मिक विद्धवानहरु, धार्मिक अनुसन्धान कर्ताहरुले धर्मका सवालमा आफ्ना मृदृल प्रवचन प्रस्तुत गर्न सक्छन तर धर्मको नजरमा तिनका विचारहरुलाई अन्तिम सत्य मानिदैन ।
तितो सत्य के हो भने, धर्मशास्त्रमा प्रशस्त सामाजिक विभेद्धका श्लोकहरु उल्लेख गरिएको पाईन्छ, किन भने तत्कालिन समाजलाई धर्मको आडमा विभेद्ध र बहिष्करणको परम्परा स्थापित गर्नु थियो ।
तर अहिलेको समाजमा धर्मको परिभाषा फेरिएको छ, समाज धर्म ग्रन्थ बाट होईन मानविय विवेक र राज्य निर्मित संविधान बाट निर्देशित भएको छ । राज्यहरु धार्मिक रुपमा निरपेक्ष छन । यो शताब्दिको समाजले बैज्ञानिक लोकतन्त्रको वकालत गर्छ सहभागिता मुलक व्यवस्थाको वकालत गर्छ, समाजमा विद्यमान विभेद्धको अन्त समतामुलक व्यवस्था बाट निर्मुल होस भन्ने चाहाना राख्दछ । मानव समाजमा विभन्नि किसिमका विभेद्धहरु विद्यमान थिए र छन त्यसमा पनि हिन्दु समाजमा छुवाछुत जन्य पृथक अमानविय विभेद्ध सदियौ एउटा वर्गले भोग्दै आएको छ ।
हिन्दु समाजमा विद्यमान छुवाछुत जन्य सामाजिक विभेद्धको कारण धार्मिक समस्या हो ? भनि कहिलेकाहि प्रश्न उब्जिन्छ । धर्ममा दोष देख्ने पक्षले दलित आन्दोलनलाई धर्म विरुद्धको आन्दोलनको रुपमा परिभाषित गर्ने काशिस गरि रहेका छन, दलित आन्दोलनले समिक्षा गर्न नसकेको एउटा गम्भिर सवाल धर्म पनि हो । पछिल्लो समय दलित आन्दोलनमा एक थरि अभियान्ताहरुले दलित शब्द र हिन्दु धर्मका कारण दलित समुदाय विभेद्ध मुक्त हुन नसकेको आरोप लगाउदै फरक बहसको शुरुवात गरेको देखिन्छ ।
दलित शब्द फेरौ हिन्दु धर्म त्यागौ भन्ने मानसिकता दलित समुदाय भित्रको एउटा वर्गमा विकास भई सकेको छ, तथ्यांकले धर्म परिवर्तन गर्नेमा दलित समुदाय अग्र स्थानमा देखिनुमा यो सोचाईको प्रभाव बढी रहेको देखिन्छ । दलित शब्द र दलित समस्याका सवालमा स्वयम दलित नेतृत्व स्पष्ट देखिदैन । दलित समस्या के हो ? दलित मुक्ती कसरी हुन्छ ? शसक्त दलित आन्दोलनका सवालमा अल्पकालिन र दिर्घकालिन रणनैतिक योजनाको अभाव दलित आन्दोलनमा शुरुवाती काल देखी रहदै आएको हो ।
मन्दिर प्रवेश बाट शुरु भएको दलित आन्दोलनले राज्यको शक्ति संघर्षमा कसरी प्रवाहिकरण हुने स्पष्ट कार्यदिशा निर्माण गर्न बाट नेतृत्व ऐतिहासिक रुपमा चुकेको पाईन्छ । आलोचनात्मक चेत, त्याग र समर्पण स्वभावको दलित नेतृत्व विकास हुन नसक्दा अवशरवादी चरित्रको नेतृत्व राजनितिक र सामाजिक आन्दोलनमा हावि भयो । दलित समुदायको एउटा निश्चित वर्गले दलितको नाममा राजनिति लाभ र गैह्र राजनैतिक लाभ ग्रहण गर्ने प्रवृतिले दलित आन्दोलन अवशरवादको नियन्त्रणमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
एक तिर दुई सिकार गर्ने चरित्र र प्रवृती दलित आन्दोलन भित्र डर लाग्दो रुपमा विकास भएको छ, अवसरवादमा लुप्त एउटा वर्गले दलितका मुद्धामा व्यापार गरि रहेको छ । दलितका मुद्धामा राज्यरोहण गर्नेहरु सुकुम्वासी, दलित र हलियाका सवालमा एउटा परियोजना विकास गर्न नसक्नुले, राज्य सँग सम्बन्ध भएको नेतृत्वको क्षमता माथी वेला वेला प्रश्न उठि रहन्छ ।
दलित आन्दोलन नेपालको शन्दर्भमा अन्य आन्दोलन भन्दा जेठो आन्दोलन हो, तर पनि यस आन्दोलनले अपेक्षित गति लिन सकेन । किन भने दलित नेतृत्वले दलित समस्यालाई सामाजिक चिन्तन र राजनितिक व्यावहार सँग जोड्न सकेन शुरुवाती कालमा धार्मिक समस्याको रुपमा दलित समस्यालाई चित्रित गर्न खोजियो । महिला, मधेशी र जनजाती आन्दोलन तुलनात्मक रुपमा सफल भए, किन भने ति आन्दोलन राज्यको चरित्र, सामाजको व्यावहार र व्याक्तिको व्याहारका विरुद्ध थिए, चिन्तनका विरुद्धमा थिए ।
दलित आन्दोलनले सामाजिक सम्बन्धका श्रृंखला निर्माण गर्न बाट चुक्यो, दलित समुदायलाई आन्दोलन सँग जोड्न बाट चुक्यो । बरु धर्मले दलितलाई अछुत बनायो, मन्दिरमा दर्शन गर्न नपाएकै कारण दलितहरु अपमानित भए, मन्दिरमा पुजारी बन्न नपाएरै समाजमा विभेद्ध भोगियो भन्ने पुरातन सोचाई भन्दा माथी दलित नेतृत्व उठ्न सकेन, परिवर्तित समाजको मनोविज्ञान सँग दलित समस्यालाई परिभाषीत गर्न नसक्दा राजनितिक आन्दोलन सँग प्रभावकारी साझेदारी गर्न सकेन ।
पुरातन चिन्तन र ईतिहासलाई दोष दिएर विकास भएको दलित आन्दोलन र नेतृत्वले एकातिर राज्यको महत्व बुझ्न सकेन भने अर्कोतिर उत्पिडित समुदायको भरपर्दो उर्जा बन्न सकेन ।केहि बौद्धिक तथा दलित अगुवाहरु दलित शब्द भित्र श्राप देखि रहेकाछन, उनिहरु दलित शब्द फेर्ने अर्थहिन तर्क गरिरहेका छन, अर्को थरी अगुवाहरु दलित समस्यालाई धर्म आवरित मुद्धा बनाउन चाहान्छन, यी दुवै कोण दलित आन्दोलनका लागी घातक प्रवृती हुन ।
दलित समुदायले भोग्दै आएको विभेद्ध धर्म आवरित समाज र सामाजिक व्यावहारले गर्दा सृजना भएको कारण छुवाछुतको प्रमुख पक्ष सामाजिक चिन्तन, मानविय व्यावहार हो भन्ने मान्यता दलित आन्दोलनमा ओझेल परेको छ । विभेद्धित सामाजिक चिन्तन र व्यावहार भित्रको सामाजिक रोगलाई कसरी परास्त गर्ने विचार, योजना तथा रणनिति विहिन दलित सामाजिक, राजनैतिक नेतृत्वका कारण दलित आन्दोलन कचल्टिएको छ ।
केहि दलित अगुवाहरु धर्मशास्त्र पढेर, ईतिहास पढेर दलित मुक्ति हुन्छ भनेर भ्रमित छन, धर्मशास्त्र पढेर दलित मुक्ति सम्भव छैन । ईतिहासको अध्यायनले ज्ञान दिन्छ, तर्क दिन्छ तर मुक्ति दिन सक्दैन, ईतिहास पढेर ईतिहास निर्माण गर्न सकिदैन । विभेद्ध बुझेर मुक्ति खोज्ने शाहसिक नेतृत्व दलित आन्दोलनको वर्तमान आवश्यकता हो । अहिलेको दलित नेतृत्व बाट समुदायले मुक्ति पाउन सक्दैन, किन भने यो नेतृत्वले दलित समुदायले भोग्दै आएको सामाजिक विभेद्ध अन्त्यको न्युनतम कार्यक्रम विकास गर्न सकेको छैन ।
यो नेतृत्व सँग समस्या सँग जुध्ने न्युनतम रणनैतिक कार्ययोजना छैन । यहि नेतृत्व र यस्तै अवस्थामा दलित आन्दोलनलाई छोड्ने हो र समयमै वैकल्पिक नेतृत्वको विकास गर्न सकिएन भने दलित आन्दोलनको विर्सजन निश्चित छ । अहिलेको नेतृत्वले गर्न सक्ने उच्चतम आन्दोलन बालि घरे आन्दोलन हो ।
प्रगतिशिल दलित आन्दोलनका लागी प्रगतिशिल विचार, प्रगतिशिल संरचना र बलियो बैचारिक नेतृत्वको विकास हुन आवश्यक छ । अहिलेको दलित नेतृत्वले आत्मसम्मानको संघर्ष गर्न सक्दैन र भावि पुस्तालाई घृणित सामाजिक विभेद्ध बाट मुक्त गर्न पनि सक्दैन ।
त्यसैले समतामुलक समाजको निर्माण गर्न रणनैतिक वैकल्पिक नेतृत्वको विकास गर्दै अन्तिम मुक्ति आन्दोलन विकास गर्न अहिलेका सचेत दलित नागरिको दायित्व बनेको छ । यो शताब्दिमा विकास भएको दलित आन्दोलनलाई भावि पुस्ताले सम्मान गर्ने ईतिहास निर्माण क्षमतावान र प्रगतिशिल नेतृत्व बाट मात्र सम्भव छ । त्यस कारण प्रगतिशिल दलित आन्दोलनका लागी आन्दोलन भित्र विकास भएका तिन वटा प्रवृतीलाई परास्त गर्न जरुरी छ ।
पहिलो प्रवृति जातिय श्रेष्ठता हासिल गर्ने लोभी मनोविज्ञान भएको एउटा समुहले दलित आन्दोलनलाई कम्जोर पारेको छ यहि प्रवृतीका विरुद्ध दलित आन्दोलनमा शुद्धिकरण हुन जरुरी छ । दोश्रो दलित आन्दोलनलाई आफ्नो पेवा ठान्ने प्रवृती, यो समुह दलित समुदायले प्राप्त गर्ने अवशरहरु सिमित घेरा भित्र सिमित गर्न चाहान्छ, दलित आन्दोलनलाई वृहत्तर अभियानको रुपमा नभई ऐच्छिक आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न चाहान्छ, यो प्रवृतीको भण्डाफोर र बहिस्कार अहिलेको आवश्यक हो, तेश्रो नेतृत्व पलायनको प्रवृती ।
दलित आन्दोलन भित्र दलितका मुद्धाहरु बेचेर विदेश पलायन हुने प्रवृति अर्को चुनौती बनेको छ । यो समुह दलित मुद्धामा स्थापित बनेर विदेश पलायन भएर परिवारीक लाभमा फसेको छ । जस्को कारण नेपालको दलित आन्दोलनले विभिन्न काल खण्डमा ठुलो चुकाउनु परेको छ । दलित आन्दोलन भित्र विकास भएका यस्ता डर लाग्दा अवसरवादी प्रवृतिले दलित आन्दोलन कचल्टाएर रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएका छन ।
दलित आन्दोलनले एक शताब्दि समय पुरा गर्दैछ आन्दोलनको शताब्दि समिक्षा गर्नै पर्छ । यस अवधिमा दलित राजनितिकर्मी, अधिकारकर्मीले दलित समस्याको बैज्ञानिक समाधानको उपाय विकास गर्न त सकेन्न बरु दलित आन्दोलनलाई शब्दमै अल्झाई रहेका छन । आन्दोलनको नेतृत्व, विचार र संरचना सम्बन्धि दृष्टिकोणको निर्मम समिक्षा दलित आन्दोलनको अहिलेको आवश्यकता हो, दलित समुदायको आत्म सम्मान प्राप्तिको नयाँ अभियानले मात्र दलित शब्दलाई सम्मानित रुपमा परिभाषीत गर्दै दलित समुदाय विभेद्धको लगुताभास बाट मुक्त गर्न सक्छ । दलित समुदायको मनोविज्ञानमा राजनितिक लाभ ग्रहण गर्ने ठेकेदारी प्रवृती र व्यापारिक चरित्रलाई निश्तेज गर्न सक्ने विचार युक्त क्षमतावान दलित नेतृत्व जस्ले मण्डेलाको जस्तै, मार्टिन लुथरको जस्तै ईतिहास दोहोर्याउन सकोस अहिलेको दलित आन्दोलनको आवश्यकता हो ।